Wararkii Ugu Dambeeyay: dalka Talyaaniga dhimashada Carona Virus oo Lix kun ku dhow.
Monday March 23, 2020 - 07:17:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in dadka udhintay cudurka Carona Virus ay ku dhowyihiin lix kun oo qof taas oo ka dhigan in Talyaanigu uu yahay dalka ugu daran ee Carona dadka ku laynayo caalamka.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Roma ayaa xaqiijisay in shalay oo kaliya ay Carona udhinteen dad gaaraya 651 qof halka uu asiibay 5560 qof, tirada guud ee dadka u dhintay Carona ee gudaha Talyaaniga ayaa gaartay 5500 (Shan kun iyo Shan Boqol).
Dadka lajiifa cudurka ee wadanka Talyaaniga ayaa kor usii dhaafaya 60,000 oo qof (Lixdan kun), hay'adda ilaalinta dadweynaha dalka Talyaaniga ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in nuqsaan uu ku yimid adeegyada caafimaadka ee isbitaallada wadanka.
R/wasaaraha Talyaaniga ayaa ugu baaqay dowladaha caalamka in ay gurmad soo gaarsiiyaan wadankiisa wuxuuna shacabka Talyaaniga ku amray in ay adkeeyaan bandawga wadanka lasaaray si loo xakameeyo Carona Virus.
Dhanka wadanka Spain dhimashada ayaa aad ukorortay waxayna ku dhowdahay 2000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka, warbaahinta maxalliga ah ayaa xaqiijisay in dhimashadu gaartay 1720 oo qof.
Qaaradda Yurub ayaa ah meesha ugu daran ee cudurka Carona uu dadka ku laynayo waxaana muuqata in dalka Shiinaha uu kasoo kabanayo halistii cudurkan halista ah, dad ka badan hal Bilyan oo qof ayaa la sheegay in ay xaalad karaantiil ah kujiraan daafaha caalamka.
Dhimashada UK ee caabuqa Carona Virus oo ku dhow 40,000.
Baraaziil oo noqday dalka Afaraad ee dhimashada ugu badan uu ka geystay Carona Virus.
Dhimashada Carona uu ka geystay dalka Mareykanka oo gaartay 100,000 oo ruux.
Dowladda Turkiga oo gaadiid gaashaaman iyo saanado hub ah ku daad guraysay dalka Liibiya.
Warar sheegaya in dad caqaba cudurka Carona ay ku dhinteen isbitaalka degmada Cadaado.
Taliska AFRICOM oo Ruushka ku eedeeyay in uu diyaarado dagaal geeyay dalka Liibiya.